Ireo mpitoraka blaogy mikasika ny lamaody any Indonezia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 31 Jolay 2010 8:46 GMT
Ireo mpitoraka blaogy malaza any Indonezia dia ireo mpitoraka blaogy mikasika ny lamaody sy ny fomba fiainana izay matetika vehivavy tanora. Iza izy ireo ary fa maninona izy ireo no malaza?
Multibrand manamarika fa nihanitombo ireo blaogy any Indonezia ary ireo blaogy mikasika ny lamaody no tena malaza dia ireo
…nanomboka tamin'ny fampahafantarana ny blaogy tany Indonezia tamin'ny taona 2000 tany ho any, niakatra ho avo telo heny ireo mpitoraka blaogy tany ampiandohany.
Ny tena mahaliana dia araka ny ambaran'ny Indonesia Matters, ilay hany tranonkala tokana manome filaharana ireo blaogy, ny lohalaharana amin'izany dia ireo mpitoraka blaogy miresa-damaody izay matetika dia vehivavy tanora avokoa
Maverick manondro ny fivoaran'ny fisafidianana foto-kevitra ataon'ireo tanora mpitoraka blaogy
Nisy fivoarana teo amin'ny hoe inona no malaza eny anivon'ny fandinihan’ ireo blaogy. Tanatin'ny taona vitsy lasa dia ireo blaogy miresaka ny fikirakirana ny Teknolojian'ny Fampitam-baovao no nalaza. Manaraka azy avy eo ireo raharaham-bahoaka sy ireo politika sosialy, miaraka amin'ireo gazety voatokana hiresahana ny fiainana andavanandro.
Tamin'ny taona 2009, na eo aza izany, ireo blaogy natokana ho an'ireo fialamboly sy fomba fiaina , indrindra ny lamaody dia nanomboka nikopak'elatra.
Diana Rikasari, ilay mpitoraka blaogy malaza indrindra mikasika ny lamaody any Indonezia, dia mpitoraka blaogy #1 ihany koa tamin'ny fandaharana nataon'ny Indonesia Matters.
Avy amin'ny blaogin'i Diana Rikasari
Evita Nuh dia mpitoraka blaogy iray hafa malaza. Vao 11 taona monja izy.
Izaho, izaho! Izaho dia zazavavy vao nandray 11 taona tamin'ity taona ity, ( eny ry vahoaka tsy 10 na 9, fa 11! ) 😀 Ao anatin'ny lamaody sy ny fakàna sary aho, noho izany dia mbola lavitra ny dia ho diaviko… tsogy rano aho hahita izay tadiavina, izany an! 😀
Jamban'ny resa-damaody aho (in-dimanjato miverina mihitsy! )
Miakanjo aho entiko hanehoana
fa tsy sanatria hanindriana
Afantoko amin'izay tsy mampangidihidy ny ankamaroan'ireo fitiavako lamaody
Fantatro tsara ny fahasamihafana eo amin'ny
vokatra tsara sy ratsy
ny hidihidy dia avy amin'ny vokatra ratsy
minoa ahy, tsy mandainga ny hoditro
dandan pol manazava ny fifandraisana misy eo amin'ny lamaody sy ny aterineto
Raha resaka ravin-damba, afaka mahazo ravin-damban-damaody mora sy tsotra ianao raha mividy izany ao amin'ny aterineto izay mitondra antsika amin'ny fotoana malazan'ny aterineto. Raha mikasika ny kaonty Twitter miresaka ny lamaody sy ny fomba fiaina, manome antsika fahafahana mizara ireo rohy amin'ny hafa ny Twitter. Ny zava-mahagaga eo amin'ny mpitoraka blaogy mikasika ny lamaody sy ny fomba fiaina dia tohanan'ireo gazety mifantina ireo mpitoraka blaogy tanora ary mamoaka ireo mpitoraka blaogy ireo sy ny fivarotany anaty aterineto ao amin'ny lahatsoratr'izy ireny ary ny vokatr'izany, miteraka resabe eo anivon'ny vahoaka izany.
Nena mitondra fanamarihana momba ny fiakaran'ny isan'ireo mpitoraka blaogy mikasika ny lamaody
… ny firoboroboan'ireo mpitoraka blaogy mikasika ny lamaody dia fitaratry ny fiaraha-monintsika ankehitriny – voasarika bebe kokoa amin'ny zavatra “maivana”, mora ampiasaina, ary ny lamaody mifanaraka kokoa amin-dry zareo mihoatra noho ny zavatra hafa. Mety misy hifandraisany amin'ny fitomboan'ireo olona tia mamoronaeo amin'ny sehatry ny lamaody Indonesiana koa ve izany?
colson dia manoritra teboka iray miabo : Manapaka ny vehivavy Indoneziana!
Raha tena marina izany dia fambara tsara. Mampiseho izany fa tsy maty tsy akory ny fitoraham-blaogy, mijoro sy tena miaina ( any Indonezia). Ary – mety mbola manan-danja noho izany aza – Manapaka ireo vehivavy Indoneziana.